वैदेशिक रोजगारबाट फर्कदै हुनुहुन्छ? सरकारले लागू गर्यो यस्तो नियम – Enepali Samchar
वैदेशिक रोजगारबाट फर्कदै हुनुहुन्छ? सरकारले लागू गर्यो यस्तो नियम
June 3, 2021 adminLeaveaComment on वैदेशिक रोजगारबाट फर्कदै हुनुहुन्छ? सरकारले लागू गर्यो यस्तो नियम
e neoaalisamchaar// काठमाडौ ।सरकारले विदेश-बाट नेपाल आउने हवाई यात्रुका लागि ७ वटा पाँचतारेसहित ७८ वटा होटल-लाई क्वारेन्टिन होटलका रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।
विदेशबाट फर्किए-पछि शंकास्पद कोरोना संक्र-मित समुदायमा नपुगुन् भन्ने उद्देश्यले क्वारेन्टिन बस्न पर्यटन विभागले होटलको सूची सार्व-जनिक गर्दै न्यूनतम माप-दण्ड तोकेको छ ।
महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङका अनु-सार कम्तीमा २० वटा कोठा भएको होटल-लाई क्वारेन्टिनका रुपमा तोकि-एको हो । सर-कारले खाडीमा वैदेशिक रोज-गारीमा गएर नेपाल फर्कनेलाई ५ दिन र अन्य अवस्थामा फर्कने नेपाली र विदेशी नागरिक-लाई १० दिन होटल बुकिङको प्रमाण देखाए-पछि मात्र नेपाल आउन अनु-मति दिने नियम बनाएको छ ।
विभागले सार्व-जनिक गरेको सूचीमा रहेका होटल-लाई यात्रुले क्वारेन्टिनका लागि बुक गर्न सक्नेछन् । विभागले यसअघि भारत-बाट आउने यात्रु-लाई राख्न तोकेका १० होटलमा अन्य ६८ वटा थप गर्दै ७८ वटाको नाम क्वारे+न्टिन होटलको रुपमा सार्व-जनिक गरेको हो ।
सर-कारले ठमेल, सुन्धारा, कलंकी क्षेत्रका होटल-लाई भने क्वारेन्टिन नबनाउने निर्णय गरेको छ । हाल नेपालले पहिलो चरणमा टर्की, कतार, चीन र भारतमा निय-मित हवा-ई उडान सञ्चा-लनमा ल्याए-को छ ।
विभागले काठ-माडौंका सांग्रिला, होटल र्‍याडिसन, होटल याक एण्ड यती, हायात रिजेन्सी, सोल्टी, होटल अलफ्ट र एभरेष्ट होटल गरी ७ वटा पाँच-तारे होटल-लाई क्वारेन्टिन तोकेको छ ।
यी होटल सञ्चालकले २५ भन्दा बढी कोठा क्वारेन्टिन बनाउन सहमत भएका छन् । चारतारे स्तरका होटल शंकर र होटल हिमालय-समेत क्वारेन्टिन होटलमा सूची-कृत भएका छन् । तीन-तारे स्तरका समिट होटल, अमादब्लम होटल, साम्बाला होटल, ले हिमालय, होटल प्लाटिनम, होटल ट्रेडिसनल कम्फर्ट र होटल ल्याण्ड-मार्कमा समेत यात्रुले क्वारे-न्टिन बस्न सक्ने छन् ।
यसबाहेक पर्यटनस्तरका ५१ होटल र दुई रिसोर्ट पनि क्वा-रेन्टिन सूचीमा समा-वेश छन् । रिसोर्टमा बुढानील-कण्ठस्थित पार्क भिलेज र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट समावेश छ । पर्यटक-स्तरीय होटेल-मा धुलि-खेल लज रिसोर्ट-लाई यो सूचीमा राखिएको छ ।
क्वारेन्टिन बसेवापत लिने शुल्क भने सरकारले तारे होटलको तोकेको छैन । ती होटल स्वयंले मूल्य तोक्न सक्ने जनाए-को छ । तर पर्यटनस्तरका होटल-को दैनिक शुल्क भने ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसभित्र बिहान-को खाजा, खाना, दिउँसोको खाजा र साँझको खानासमेत पर्छ । – खबरहव
वर्षमान पुन पनि अनुदानमा आएको सिलिन्डर बेचेर लाखौ कमाउने धन्दामा
राजाको समर्थन देखेर राष्ट्रपतिको पनि निद हराम, आफ्नो पद नै जाने डर !